Ehud Isacoff, Ph.D., Evan Rauch Guddoomiyaha, Waaxda Neuroscience, Jaamacadda California, Berkeley
Dirk Trauner, Ph.D. Janice Cutler Guddoomiyaha Chemistry iyo Adjunct Professor of Neuroscience iyo Physiology, Jaamacadda New York
Firfircoonaanta Sawir-qaadista ee Dopamine-ka loo yaqaan Model-ka Parkinson & #8217; s Cudurka
Dopamine guud ahaan waxaa lagu yaqaanaa ururkeeda abuurista dareenno wanaagsan ama doorkeeda balwadda. Laakiin dhab ahaantii, dopamine wuxuu ciyaaraa doorar badan oo kala duwan, waxaana jira shan nooc oo kala duwan oo ah dhakhaatiirta dopamine-ka oo laga helo unugyada maskaxda, mid walbana wuxuu leeyahay saameyn badan oo isku dhafan xagga hoose ee la xiriirta dhaqdhaqaaqa, waxbarashada, hurdada iyo waxyaabo kaloo badan. Marka lagu daro inuu yahay isku-buuqa dhaqdhaqaaqa, cudurka Parkinson sidoo kale waa cilad garasho waxaana keenaya luminta fikrada 'dopamine'.
Drs. Isacoff iyo Trauner waxay baarayaan dariiqooyin cusub oo si sax ah loogu xakameyn karo dhaqdhaqaaqa soo-dhoweynta loo yaqaan 'dopamine receptor' ee maskaxda isla markaana la mid ah luminta soo dhoweynta laga helay bukaannada Parkinson. Qaabka sheybaarka ayaa loo adeegsadaa sawirro la arki karo oo la arki karo (PTL) - gaar ahaan, dopamine oo ah imaam ku dhegan suxuunta canqowga, oo taas bedelkeeda ku dhejin doonta keliya dhakhaatiirta dopamine gaar ah ee unugyada gaarka ah. PTLs waxaa lagu soo bandhigaa maskaxda, waxaana fiilooyinka tooska ah ee tooska ah ay toos u gaarsiiyaan aagagga ay ku jiraan PTLs, oo la mid ah gundhigga loo isticmaalo in lagu gaarsiiyo tamarta korantada ee dhiirrigelinta maskaxda ee qoto dheer. Tijaabadu waxay ogaaneysaa haddii xayawaanka lahaa calaamadaha dopamine-ka dillaacay ay dib u soo ceshan karaan xakamaynta dhaqdhaqaaqa iyagoo adeegsanaya PTLs la bartilmaameedsaday iyo iftiin - isla markaaba, si sax ah ayey dib ugu soo nooleynayaan shaqadii ay ku lahaayeen wareegga wareegga, iyada oo aan la helin saamaynaha aan la fileynin ee hagaajinta dawooyinka.
Baadhitaan ay sameeyeen Drs. Isacoff iyo Trauner ayaa kaamil ah geedi socodka horumarinta iyo gaarsiinta PTL-yadaas oo ay suuragal tahay inay muujiyaan waxtarkooda. Tani waxay ku dambayn kartaa fasal cusub oo daweyn ah oo keliya maahan Parkinson's, laakiin sidoo kale cilado maskaxeed kale ayaa sidoo kale ah.
Mazen Kheirbek, Ph.D., Caawiye ku takhasusay cilmu-nafsiga, Xarunta Is-dhexgalka Neuroscience, Jaamacadda California, San Francisco
Yoonis Chan, Ph.D., Professor of Neurology, Weill Institute for Neurosciences, Jaamacadda California, San Francisco
Qaab-dhismeedka Myelin-ka cusub ee isku-darka nidaamyada iyo dib-u-soo-kabashada xusuusta ka fog
Maskaxda jidh ahaan way isbeddelataa markay soo gasho oo ay kaydiso xogta - sida haddii aad furtay kumbuyuutar ka dib markii aad keydiso xogta oo aad ogaatay in silig uu ka sii yaraaday ama ku sii fiday wareegga u dhow sidoo kale. Nidaamkani wuxuu si gaar ah u dhacayaa sameynta sheybaxda myelin ku wareegsan axons (qayb ka mid ah neurons) oo loo muujiyay inuu door ka ciyaarayo kor u qaadida tayada wada xiriirka gudaha iyo inta udhaxeysa wareegga neuronal-ka, kaasoo fududeyn kara dib u soo celinta xasuusta qaar.
Waxa aan la fahmin waa haddii qaab-dhismeedkaani ay u sameysan yihiin wareegyo quseeya xusuusta qaar ka badan kuwa kale. Iyada oo la adeegsanayo nooca jiirka, Dr. Kheirbek iyo Dr. Chan waxay sahaminayaan geedi socodkan, iyagoo raadinaya inay fahmaan haddii geesaha unugyada neuronal-ka ay firfircoon yihiin waayo-aragnimada cabsida leh ayaa si gaar ah loo doorbidayaa - muhiimad ahaan, taasoo ka dhigaysa xusuusta naxdinta leh si sahlan oo lagu xusuusto - iyo sida ay hawshani u shaqeyso una awooddo loo maareeyay. Daraasad horudhac ah ayaa lagu ogaadey in xaalad cabsi leh ay keentay kororka unugyada kuwaas oo horudhaca u ah samaynta myelin, iyo in howshan ay ku lug lahayd isku-darka muddada dheer ee xusuusta cabsida.
Hal tijaabo ayaa lagu calaamadayn doonaa unugyada shaqeynaya inta lagu guda jiro xaalada cabsi ee macnaha leh oo isha ku haysa unugyada unugyadaas; ka dib, cilmi baadhayaashu waxay u adeegsan doonaan waxqabadka korantada ee wareegyada kala duwan si loo go'aamiyo waxa sababaya in myelination dheeraad ah uu u dhaco. Tijaabooyin dheeri ah ayaa ogaan doona haddii jiirarka lahaa myelin cusub ay xakameeyeen waxay muujinayaan isla jawaabta cabsida leh ee jiirarka qaab dhismeedka myelin caadi ah. Tijaabada seddexaad waxay daawan doontaa geedi socodka oo idil oo leh muuqaal sare oo muuqaal sare ah muddo dheer. Baadhitaanku wuxuu yeelan karaa raad ku yeelan kara xaaladaha sida Post Traumatic Stress Disorder, halkaas oo xusuusta murugada leh iyo jawaabta cabsida la dhaqaajiyo, ama jahwareerka xusuusta halkaasoo xusuusta ay khalkhal gasho.
Thanos Siapas, Ph.D., borofisar ku takhasusay cilmiga kombiyuuterka iyo nidaamyada neural, qeybta cilmiga bayoolaji iyo injineernimada bayoolaji, machadka farsamada
Dhaqdhaqaaqa Circuit iyo Cawaaqibka Fahamka Guud ee Suuxdinta Guud
In kasta oo suuxdinta guud (GA) ay caajis u ahayd daawada iyadoo loo oggolaanayo qalliinno aan suurtagal ku ahayn bukaannada soo jeedo, hababka saxda ah ee GA loo saameeyo maskaxda iyo saameyntooda muddada dheer ayaa si liidata loo fahmay. Dr. Siapas iyo kooxdiisu waxay raadinayaan inay ballaariyaan aqoonteena asaasiga ah ee saamaynta GA ee maskaxda ee tijaabooyin isdaba joog ah, iyagoo albaab u furaya cilmi-baaris dheeraad ah oo ku saabsan shaqada iyo adeegsiga GA oo maalin uun u horseedi kara adeegsiga bini-aadamka oo hagaaga.
Dr. Siapas ujeedadiisu waa in la isticmaalo duubista barnaamijyo badan si loo kormeero howlaha maskaxda inta lagu guda jiro suuxinta, iyo in la shaqaaleeyo qaababka barashada mashiinka si loo ogaado loona garto astaamaha xogta neural. Kooxda waxay duubi doonaan waxqabadka inta lagu gudajiro iyo soo bixitaanka GA, iyo sidoo kale inta lagu gudajiro xaalad joogta ah, si loo go'aamiyo sida saxda ah ee maskaxdu u marto. Baadhitaankan ayaa laga yaabaa inuu si gaar ah waxtar ugu yeesho fahamka iyo caawinta kahortaga wacyiga wada shaqeynta, xaalad ay bukaanku mararka qaar ogaadaan waxa dhacaya laakiin aan awoodin inay dhaqaaqaan, taas oo u horseedi karta dhaawac daran.
Tijaabada ugu dambeysa waxay eegi doontaa saameynta garashada muddada-dheer ee GA. Dad badan ayaa la kulma saameynta garashada muddada-gaaban kadib suuxdinta, laakiin boqolkiiba in yar ayaa la il daran muddo-dheer ama daciifnimo xagga garashada ah. Kooxda ayaa u adeegsan doonta maamulka GA (mar labaad jiirarka), ka dib waxay tijaabin doonaan cilladaha xagga waxbarashada ama garashada, waxayna diiwaangelin doonaan waxqabadka maskaxda ee la xiriira cilado kuwan.
Carmen Westerberg, Ph.D., Kuxigeenka Professor, Qeybta cilmu-nafsiga, Jaamacadda Texas State
Ken Paller, Ph.D., borofisar cilmu-nafsi iyo James Padilla Guddoomiyaha cilmiga fanka & cilmiga, waaxda cilmu-nafsiga, Jaamacadda Northwwest
Miisaaniyadda Hurdada ee Sare ma waxay gacan ka geysanaysaa Firfircoonida Xusuusta? Saamaynta La-tacaalista Iloobo
Drs. Westerberg iyo Paller iyo kooxdoodu waxay rajeynayaan inay helaan fahamka geedi socodka hilmaamida iyagoo daraasad ku samaynaya cilmiga barashada hurdada ee dadka aan waligood illoobin. Shakhsiyaadkan, oo la sheegay inay leeyihiin xaalad loogu magac daray “Xusuus-qoris heer sare ah oo heer sare ah,” ama HSAM, waxay si xamaasad leh u xasuusan karaan faahfaahinta daqiiqada nololeed ee noloshooda si cad oo la mid ah, bal inay dhacday isbuucii hore 20 sano ka hor. Isbarbar dhig ahaan, bini’aadamka badankood waxay xusi karaan isla faahfaahinta kuwa la mid ah HSAM toddobaadyo qaar, laakiin wixii intaas ka dambeeya waxay dib u xusuustaan kaliya waqtiyo muhiimad gaar ah si faahfaahsan.
Fiisikada cilmiga hurdada ayaa la soo jeediyey sida ugu macquulsan ee farqiga u ah kuwa qaba HSAM iyo kuwa aan lahayn. Hurdadu waxay caan ku tahay inay door muhiim ah ka ciyaarto xoojinta xusuusta, iyo daraasad faahfaahsan oo bini aadam ah oo ku saabsan firfircoonida maskaxda inta lagu gudajiro hurdada HSAM oo la xakameeyo shaqsiyaadka ayaa duubi doona, isbarbardhigaya iyo kala dhig dhigi doona astaamaha oscillations gaabis ah (oo kuxiran xoojinta xusuusta), hurdooyinka hurdada (sidoo kale kuxiran isugeynta, oo laga duubay heerar sare shaqsiyaadka HSAM) iyo siyaabaha ay isugula shaqeeyaan.
Daraasad labaad ayaa muujineysa madax-madax-adeegsi sahlan oo u oggolaanaya maaddooyinka in lagu cabbiro labadaba hurdada iyo macluumaadka xusuusta ee guriga muddo bil ah, si loo go'aamiyo haddii kor u qaadista jimicsiga hurdada ee habeennada badan ay gacan ka geysato xusuusta sare ee dhacdooyinka dhacay hal bil. hore. Intaa waxaa sii dheer, adoo hagaya dib-u-kaydinta xusuusta aan ku salaysnayn dabeecadda dabeecadaha leh dhawaaqyada dhawaaqa ee la soo bandhigay intii lagu jiray hurdada, daraasaddan ayaa kaa caawin doonta in la muujiyo in kor loo qaaday jimicsiga hurdada ee shaqsiyaadka HSAM ay sidoo kale kor u qaadi karto xusuusta aan-tooska ahayn ee xusuus-qorka. Drs. Westerberg iyo Paller waxay rajeynayaan in markaan helno sida sare ee xusuusta ay u shaqeyso, waxaan awood u yeelan karnaa inaan daboolno qaababka kuwa ka xanuunsan shaqada xusuusta hoose, sida kuwa qaba cudurka Alzheimers, iyo laga yaabee inaan helno habab cusub oo lagu fahmo laguna daweeyo xaaladaha.
Denise Cai, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Department of Neuroscience, Iskuulka Icahn ee Daawada Buurta Sinai
Mashruucyada Circuit Memory of Linking
Dr. Law wuxuu baraa siyaabaha xasuusta iyo barashada lagu duubo maskaxda, iyada oo si gaar ah diiradda loo saarayo sida firfircoonida xilliga ku-meel-gaadhka ah u saameynayso geeddi-socodka. Daraasaddeeda waxay sahamisaa sida taxanaha iyo waqtiyada khibradaha ay saameyn ku yeelanayaan habka xasuusta loo kaydiyo, la xidhiidha, iyo xusuusta.
Cilmi-baaristu waxay leedahay saameyn muhiim ah oo loogu talagalay dhibaatada ka dhalata murugada ka dib (PTSD), oo ah xaalad halis ah oo saameysa ilaa iyo 13 milyan oo Maraykan ah, oo leh cudur aad u fara badan oo ka mid ah cudurrada hiddawada-ku dhawaad 20 boqolkiiba. Dadka la il daran PTSD dib u soo noqoshada xasuusta naxdinta leh, taas oo si ba'an u saameeya dabeecadooda iyo tayada nolosha. Iyada oo ku saleysan cilmi-baadhisteeda, Dr. Cai wuxuu soo jeediyay in waayo-aragnimooyinka xun ama qibrada leh ay kordhin karaan daaqada wakhtigaas oo laga yaabo in xasuustu ku xiran tahay. Maskaxda qof uu ku dhaco argagaxa, cabsidaas waxaa loo wareejin karaa xasuusin aan la xariirin oo dhacay saacado, ama xitaa maalmo, ka hor dhacdadii naxdinta leh.
Si loo tijaabiyo aragtida, Dr. Cai iyo wada-shaqeeyayaasheeda waxay soo saareen miniscope wireless gaar ah si ay u sawirtaan dhaqdhaqaaqa maskaxda ee jiirka. Miyuusigu wuxuu ku xiran yahay madaxa jiirarka oo si xor ah u xajiya baqshimadooda iyada oo dhaqdhaqaaqa neuraliyadu la duubo waqtiga dhabta ah. Dr. Law wuxuu ilaalin karaa oo diwaangelinayaa calaamadaha neur-socodka la hawl-galo marka xasuus-qorka la xusuusto oo tijaabiyo haddii la demiyo xanuunka gaarka ah ee saameeya xariirka xasuusta. Tiknooloojiyadda Miniscope waxay u oggolaataa Dr. Cai in uu qabsado oo uu falanqeeyo dhaqdhaqaaqa maskaxeed khibradooyin badan oo la xidhiidha wakhtiyada, taas oo muhiim u ah fahamka xusuusta caadiga ah iyo is-qabqabashada. Dr.Cali wuxuu rajeynayaa in cilmi-baaristu ay hagaajin doonto fahamkeena dhibaatooyinka noocan oo kale ah sida PTSD oo horseedi karta horumarinta daaweynta cusub ee xanuunka.
Xin Jin, Ph.D., Associate Professor, Laybereeriga Nuugiyaalka Baaritaanka Naasnuujiyeynta, Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Qoondeynta Qalabka Striatal Patch iyo Qaybaha Matrix ee Waxbarashada Waxqabadka
Barashada waxqabadyada adag ee isdaba-maraya ayaa muhiim u ah hawlaha bani-aadmiga - wax kasta oo ka yimaada baaskiil si ay u galaan ereyga erayga. Dr. Jin iyo kooxdiisa kooxdiisa ee Salk ayaa raadineysa sida maskaxdu wax u barto, dukaameeyso oo ay xasuusiso "kuwaan xusuusto." Intaas waxaa sii dheer, kooxdu waxay baran doontaa sida aqoonta loo soo xushay "xusuusinta mootada" waxaa loo tarjumay dhaqdhaqaaq jir, tusaale ahaan, helitaanka murqaha si toos ah u sameeyaan taxane dhammeystiran oo ficillada saxda ah (kor u qaad gacmaha / faraha qandaraaska / suxulka suxulka / calaacalaha gacanta) marka maskaxdu ay si toos ah u siiso talaabo ballaadhan (garaac kubada kubbadda.)
Cilmi-baadhista Dr. Jin wuxuu diiradda saari doonaa gangliyada aasaasiga ah, qayb ka mid ah maskaxda la xiriirta barashada, dhiirigelinta iyo go'aan qaadashada. Gaar ahaan, Dr. Jin wuxuu doonayaa in uu fahmo doorka iyo waxqabadka qaybta ba'an iyo qiyaasta qiyaasta ganglia iyo wadooyinka iyada oo waxqabadka neefta ay dhacaan inta lagu jiro barashada iyo fulinta dabeecadaha adag.
Si loo sameeyo cilmi-baaristan, Dr. Jin wuxuu la shaqeynayaa jadeecada oo baran doona qaab fudud oo kabid ah si ay u helaan abaalmarin cunto ah. Naqshadeynta taxanaha waxay ku siinaysaa Dr. Jin inuu fahmo sida habka ficilka loo bilaabi karo iyo sida maskaxgu u xakameynayo isbedelka ficilka kadibna joojiyo taxanaha. Farsamooyinka casriga ee horumarsan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu ilaaliyo loona isticmaalo waxqabadka neural ee qaybaha ba'an iyo qiyaasaha qiyaasaha si loo go'aamiyo sida qaybaha kala duwan iyo dariiqyada ay u saameeyaan barashada iyo fulinta dabeecadaha xiga. Dr. Jin iyo mashruuca kooxdiisa ayaa laga yaabaa inay horseedi karaan daaweyn ama daaweyn loogu talagalay xanuunka neerfaha sida cudurka Parkinson, cudurka Huntington iyo Cudurka qasabka ah ee 'Obsessive Compulsive Disorder'.
Ilya Monosov, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Neuroscience, Iskuulada Washington University School of Medicine ee St. Louis
Nidaamyada Qalabaynta ee Macluumaadka Raadinta ee Hubin la'aanta
Bini'aadamka iyo xayawaanka kale waxaa badanaa ku dhiira geliya inay ogaadaan waxa ay mustaqbalkoodu ku kaydsan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, inta badan waa la og yahay sida ay u dhaqmaan habdhaqanka dhiirigelinta, wax yar ayaa loo yaqaanaa hababka qaybi ee raadinta macluumaadka - sida dhiirigelinta nalaga rabo inaan hoos u dhigno hubin la'aanta mustaqbalka waxaa lagu xakameynayaa, hababka maskaxdu ku lug leedahay, iyo sida ay u saameynayso dabeecada.
Ka qaadida ama dhimista hubin la'aanta mustaqbalka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah go'aamada. Iyadoo ururinta iyo qiimeynta xogta, dadka iyo xayawaanka waxay dooran karaan doorashooyin keeni kara natiijooyin waxtar leh ama hoos u dhaca cawaaqib xun. Natiijo ahaan, macluumaadka ka caawiya yareynta hubin la'aanta waxay leedahay qiimo ahaan iyo keligiis.
Kombiyuka Monosov wuxuu sahmin doonaa hababka dhexdhexaadinta go'aamada marka la eego hubin la'aanta, iyo gaar ahaan, sida maskaxdu u maleynayso helitaanka macluumaadka iyo koontaroolkeena darawalnimada si loo yareeyo hubin la'aan adoo u qoondaynaya qiimaha macluumaadka. Mashruucan waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu iftiimiyo waxyaabaha astaamaha ah (sida nooca natiijada ama heerka hubaal la'aanta) saameyn ku yeelato qiimaha loo qoondeeyey macluumaadka mustaqbalka, iyo hababka neerfiga ku lug leh ficil ahaan si loo helo aqoontan. Shaqadani waxay ku caawin kartaa in lagu daaweeyo xaalado kala duwan oo la xidhiidha go'aan qaadashada khatarta ah, sida khamaarka khamaarka (oo mawduucyada khatarta xad-dhaaf ah u keenaya caddaynta) ama welwel ba'an (oo maadooyinka aysan qaadanin xitaa khatarta ugu yar ).
Vikaas Sohal, MD, Ph.D., Aasaasaha Aasaasiga, Waaxda Maskaxiyan iyo Machadka Weilliga Noolaha, Jaamacada California, San Francisco
Isticmaalida Qaabbilooyin Cusub oo loogu talagalay Voltage Imtixaanka Imtixaanka Sida Qaabbileyaasha Dopamine horey u-dhigan waxay ku kaalmeeyaan Gamma Oscillations iyo Habdhaqanka Casriga ah
Dr. Sohal wuxuu cilmi baaris ku sameynayaa sababaha asaasiga ah ee shisoofraniya. Inkasta oo dadku ay badanaa la xiriiraan shisoofrani ay la socdaan calaamadaha ugu muuqda, sida paranoia ama muuqaalada maqalka, waa dhab ahaan garashada cilladaha saameynaya tayada nolosha dadka xanuunsan. Mid ka mid ah awoodda garashada garashada ee xanuunka dhimirka ee shisoofrani waxay baraneysaa sharciyo cusub marka sharciyada isbedelaan. Dadka qaba cudurka dhimirka ee shisoofraniya waxay muujinayaan dulqaad - sii wadida raacitaanka qaanuunkii hore xitaa marka xeerarku bedeleen.
Cilmi-baarista Dr. Sohal wuxuu diiradda saarayaa baaritaanka parvalbumin (PV) interneurons (kaas oo u gudbiya calaamadaha u dhexeeya qanjirrada kale) iyo gamma-oscillations (qaababka rhythmic ee maskaxda oo loo malaynayo in ay ka soo baxaan isdhexgalka ka dhexeeya niyoolojiyada niyad jabka iyo xanuunka). Cilmi-baadhis ayaa muujisay in shakhsiyaadka qaba shisoofrani ay leeyihiin heerar hoose oo ka mid ah farsamoyaqaannada caalamiga ah iyo sidoo kale heerarka hoose ee gambaleelka qamaarka qaarkood ee la xiriira hawlaha garashada.
Dr. Sohal wuxuu ilaalin doonaa nacaybka marka jiirarka, lagu tababaro dabeecada ka dib xeerar gaar ah, si lama filaan ah u waafaqsan xeerarka cusub. PV interneurons ayaa lagu farxi karaa dopamine oo la sii daayo marka maaddo la wajaho natiijooyin lama filaan ah. Isticmaalka jiirarka oo leh rikoodhada dopamine ee la doorto ee la soo tuuray ee ku jira PV interneurons, Dr. Sohal wuxuu fiirin doonaa sida dhaqdhaqaaqyadooda neerfaalka ay uga duwan yihiin jiirarka caadiga ah marka ay la kulmaan xeerka isbedelka. Dhowr tijaabo oo tijaabo ah ayaa fiirin doona gamma oscillations iyo sida ay iskugu xirmaan iskudhafidooda ay saameyn ku yeeshaan jiritaanka ama maqnaanshaha qaar ka mid ah daawooyinka dopamine ee noocyada gaarka ah ee maskaxda ee gudaha maskaxda. Iyada oo si fiican loo fahmo sida habka maskaxda wax looga bedelo isbeddelka, waxaa la rajeynayaa in maalmaha isbitaallada lagu beegsado si loo hagaajiyo hawlahaas dadka qaba shisoofrani.
Elizabeth Buffalo, Ph.D., Professor, Dept. of Physiology & Biophysics, Jaamacadda Washington Washington School of Medicine; iyo madaxa, Neuroscience Division, Xarunta Cilmi-baarista Qaranka ee Washington
Neural Dynamics ee Xasuusta iyo Aqoonsiga ee Hannaanka Hippocampal
Dr. Buffalo iyo kooxdeeda ayaa baaraya qaababka lagu xoojiyo xasuusta iyo garashada iyadoo la baranayo sida isbeddelka udhaca hawlaha neuronal ee ilo-bini-aadanka aan ku xirnayn awoodda ay u leeyihiin inay bartaan oo ay xasuusnaato. Mashruucaan, cilmi baarayaasha Buffalo Lab ayaa tababaray muraayadaha macaque si ay u isticmaalaan joysticks sida ay u socdaan iyada oo loo marayo jawi muuqaal ah oo muuqaal ah, halka dhaqdhaqaaqa maskaxda ee qoto dheer ee lobe mareegta la duubay loona falanqeeyay. Hadafku waa in la helo faham weyn oo ku saabsan sida urursiga nuuroon ee dhismaha hippocampal ee masruufka lagu abuurayo, iyo in aragtida ururrada shabakada ay ku dareen jiirka ay ku habboon yihiin qiyaasta. Waxyaabaheeda waxay ku dari kartaa iftiinka cusub ee sababta dhibaatooyinka dhismeyaashu ay ufududin karaan awoodda maskaxda ee lagu kaydin karo oo loo soo qaadan karo macluumaadka, taas oo horseedi karta habka daaweynta cusub ee loogu talagalay shakhsiyaadka ka horyimaadda laf-dhabarka caadiga ah ee Epilepsy, Depression, Schizophrenia, iyo cudurka Alzheimers.
Mauricio R. Delgado, Ph.D., Associate Professor, Dept. of Psychology, Jaamacadda Rutgers
Nidaamka Xasaasiyadaha Qorista ah ee Casriga ah ee Isticmaalka Istaraatiijiyada Dareenka ah
Delgado Lab for Neuroscience Bulsho iyo Naas-nuujiso waxay sahamisaa isdhexgalka dareenka iyo garashada maskaxda dadka inta lagu jiro hababka barashada iyo go'aan qaadashada. Kalluumaysiga Dr. Delgado hore u muujiyay in xasuusinta xasuusta xasuusta wanaagsan ay qori karto nidaamka abaal-marinta jimicsiga iyo jawaab celinta cortisol, isaga iyo kooxdiisa ayaa baaritaan ku sameeynaya in diiradda la saarayo dhinaca wanaagsan ee xasuusta taban ay wax ka beddeli karto xasuusta xasuusta, iyo xitaa Isbedel dareenka ah ee soo jiidata marka xigta in xasuusta la soo celiyo. Si ay sidaas u sameeyaan, cilmi-baarayaasha waxay waydiisanayaan ka-qaybgalayaasha in ay xasuusiyaan xusuus-qor xasaasi ah waqtigii loogu talagalay, iyagoo adeegsanaya falanqaynta habdhaqanka iyo FMRI si ay u muujiyaan hababka neuralnimada ee ku lug leh qawaaniinta xasuusiyooyinka xasaasiga ah. Natiijooyinka noocan oo kale ah waxay keeni karaan qalab cusub iyo istaraatiijiyooyin daweyn si loo wanaajiyo tayada nolosha dadka qaba caafimaadka maskaxda iyo xanuunka niyadda.
Bruce E. Herring, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Qaybta Nuuryjiyada, Qaybaha Farsamada Biyolojiga, Dornsife Kuliyadaha Warshadaha, Farshaxanka iyo sayniska, Jaamacada Southern California
Fahmitaanka Cilad-celinta Qalal-maskaxeed ee Is-beddelka Xanuunka Autism-ka
Dr. Herring iyo kooxdiisa ayaa dhawaan ku soo gebogebeeyay "booska kuleylaha" ee loogu talagalay horumarinta Autism Spectrum Disorders, iyada oo la ogaaday siddeed nooc oo isku-dhafan oo kala duwan oo loo yaqaan 'autism-related mutations' oo lagu dhejiyay geedka TRIO oo mas'uulka ka ah borotiinka oo xoojinaya awoodda ama daciifnimada xidhiidhada u dhexeeya maskaxda unugyada. Hadda, cilmi-baarayaasha Herring Lab ayaa ku soo saari doona jiirarka injineerka sida xayawaanka xayawaanka si loo ogaado in carqaladeynta hawlaha TRIO inta lagu jiro mudo halis ah oo horay u jirtay horumarinta maskaxda ay ku xirantahay xiriirka ka dhexeeya unugyada maskaxda ee ku lug leh horumarinta ASD. Cilmi-baadhistii Dr. Herring ayaa laga yaabaa in ay gacan ka geysato horumarinta fikradaha cusub ee ku saabsan hababka molekussion-ka ee hoosta ka ah autismka, oo iftiiminaya iftiinka cusub ee ku saabsan sida loola jeedo cilad-celin-xumada oo waxtar u leh cudurka garashada.
Steve Ramirez, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Dept. of Psychological and Science Sciences, Jaamacadda Boston, Xarunta Isku-dhafka Nafaqada iyo injineernimada
Farsameynayo Beddelidda Wax-qabadka wanaagsan iyo Miyir-darrada ah si loo yareeyo Jawaabaha Cabsida Maladiga ah
Dr. Ramirirez wuxuu diiradda saarayaa soo bandhigida qaababka wareegga neerfaha ee xasuusinta xusuusta iyo dib u soo celinta, iyo helitaanka siyaabo lagu dabooli karo xusuusta si looga hor tago dawladaha maladiga ah ee lagu arko cudurrada caqligal ah sida Cudurka Dabeecadda Dhibaatada ee Dhibaatada ah. Cilmi-baarayaasha Ramirez Group ayaa dhowaan soo saaray nidaam hindisaha hiddaha oo unugyada kuwaas oo si firfircoon u shaqeeya xilliga xasaasiga ah ama xasuusta xasaasiga ah waxaa lagu calaamadiyay saamaynta iftiinka-iftiinka, tiknoolajiyad cusub oo siinaya cilmi-baarayaasha indhaha xasuusta unugyada xasuusta ee jiirarka. Iyadoo la adeegsanayo habkan cusub, Ramirez iyo kooxdiisa ayaa hadda baadhaya haddii dabeecad ahaan loo xakameynayo ama xoojinta xasuusta wanaagsan waxay yareyn kartaa jawaabta cabsida ee ku xiran xusuusta taban, cilmi-baaris oo laga yaabo in ay saldhig u noqoto waddooyinka daaweynta mustaqbalka iyo bartilmaameedyada daroogada ee bini-aadanka uu saameeyey PTSD iyo dhimir kale xanuunada.
Donna J. Calu, Ph.D., Kaaliyaha kalkaaliyaha ee Waaxda Isboortiga iyo Nuuryjiyada, Jaamacadda Maryland, Iskuulka Daawada
Farqiyada Shakhsiyeed ee Digniinta Calaamadaha ee Amygdala
Dr. Calu ayaa cilmibaaris ku samaysay rabitaankeedii ahaa in uu fahmo u nuglaanshaha shakhsi ahaaneed ee daroogada, taas oo muujinaysa khasaarayaashii 'culus' si ay u raadsadaan una qaataan daroogo xitaa marka la eego cawaaqibyada xun ee daroogada. Guud ahaan, bani'aadamka ayaa wax ka beddelaya habdhaqankooda marka qiimaha natiijada si lama filaan ah ay uga soo kabato ama ka sii fiicneyd intii la filayay, laakiin awoodda beddelidda dhaqanka marka xaaladuhu ka sii daraan waxaa lagu dhibaateeynayaa shakhsiyaadka la qabatimay. Si aad si fiican u fahamto calaamadaha khatarta ah ee la qabatimay waxaa muhiim ah in la fahmo sida shakhsiyaadka ay u kala duwan yihiin ka hor inta aan la gaarin wixii daawo ah ee xadgudubka. Imtixaanka Calu wuxuu adeegsadaa qaababka xayawaanka si uu u barto hababka maskaxda ee calaamad u ah calaamadeynta iyo farqiga ujeedooyinka shakhsiyeed ee jiirka. Saxeexayaasha saxiixa waxay muujinayaan dardargelinta dhiirigelinta kicinta ay sameeyeen calaamadaha cuntada iyo daroogooyinka la xidhiidha cuntada, halka gool-raadiyeyaashu ay isticmaalaan amarrada si ay u hagaan jawaab celinta suurtagalka iyadoo lagu saleynayo qiimaha hadda ee natiijada. Dr. Calu wuxuu qorayaa waxqabadka dhabta ah ee shaqsiyaadka amygdala ee shakhsi ahaaneed si loo eego sida loo dabagalo marka ay saxiixaan- iyo goolal-raadiyeyaashu waxay qabtaan shaqooyin ku xadgudba filashadooda. Waxay sidoo kale xushmeyneysaa joojinta neur-mareenada si loo eego doorka waddooyinka amygdala si ay ugu soo jiidato sheekooyinka ku wajahan cawaaqibyada xun. Dr. Calu wuxuu tixgelin doonaa natiijooyinka kooxda sida ay ula xariirayaan fahamka u nugulnaanta shakhsiga iyo ka hortagga mukhadaraadka.
Fred H. Gage, Ph.D., Professor, Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga, iyo Matthew Shtrahman, MD, Ph.D., Kaaliyaha Professor, University of California, San Diego
Isticmaalida Deep In Vivo Labo Sawirro Ca2 + Sawir Qaadista Kala Qaybsanaanta Jaantuska
Drs. Gage iyo Shtrahman waxay raadinayaan sida hippocampus ay u kala soocaan waayo-aragnimooyinka la midka ah ee lagu sameeyo xusuusta isku-dhafan, geeddi-socod oo lagu magacaabay kala-goynta qaabaynta. Gaar ahaan, waxay baarayaan sida hippocampus hirgelinta macluumaadka dareen dimoqraadi ah oo isbedbedalaya inta lagu jiro sameynta xusuusta. Waxa ay diiradda saari doonaan waxbarashadooda ku saabsan gurraska cirridka ah, gobol ka mid ah hippocampus oo loo maleynayo in ay muhiim u tahay kala-goynta qaabka iyo mid ka mid ah kaliya laba gobol oo ku jira maskaxda mammalian oo abuuraysa dareemayaasha cusub ee nolosha oo dhan. Gage iyo Shtrahman waxay isticmaali doonaan laba-sawir-qaadis calcium ah si ay u baaraan waxqabadka dhalaanka neur-mareenka ee ku yaala gobolka maskaxda ee qoto dheer si ay si fiican u fahmaan shaqadan muhiimka ah ee maskaxda. Fahamka nidaamyadani waxay ku siin doonaan fikrado muhim ah oo ku saabsan sababta aan u awoodno inaan wax u barto oo aan xasuusno xanuunka da'da iyo sida cudurka hippocampal uu keeno xasuusto xasuusto weyn ee xanuunada sida Alzheimer's disease and schizophrenia.
Gabriel Kreiman, Ph.D., Cilmi-baaristaha Ophthalmology iyo Neurology, Isbitaalka Carruurta Boston, Isbitaalka Harvard Medical
Nidaamka Dabeecadda, Fizigaliga iyo Habdhismeedka Heshiiska Hoosudhaca Xusuusta ee Maqalka Aadanaha
Adoo muujinaya sawirada filimada shakhsiyaadka iyo go'aaminta waxa ay awoodaan in ay xasuustaan aragtida, Dr. Kreiman iyo kooxdiisa ayaa ku dadaalaya inay fahmaan sida xusuusta dhabta ah. Xasuusta Episodic "waxay ka dhigan tahay dharka ugu muhiimsan ee nolosheena," ayuu yidhi, isaga oo ku dhex jira wax kasta oo ku dhacaya shakhsi ahaan iyo ugu danbayntii aasaasida aasaaskii qofka aan nahay. Sababtoo ah dhismaha xasuusinta episodic waa mid aad u adag in la dabagalo nolosha dhabta ah, Kreiman wuxuu u adeegsanayaa filim ahaan wakiilnimo, maxaa yeelay dadku waxay yeeshaan jaaliyada dareenka leh jilayaasha markay sameeyaan dunida dhabta ah. Kreiman iyo kooxdiisa ayaa si xad dhaaf ah u baranaya hababka farsamaynta habdhaqanka ee keenaya xusuusta iyo ka-dhaafitaanka iyo dhisida qaab xisaabeed oo saadaalinaya filimka filimku uu noqon doono iyo ma noqon doono mid xusuusta maadooyinka. Kreiman wuxuu la shaqeynayaa Dr. Itzhak Fried ee UCLA, kuwaas oo shaqadooda qaba bukaanka suuxdinta siinaya fursad ay ku bartaan dhaqdhaqaaqa neuronal ee hippocampus inta lagu jiro sameynta xasuusta xasuusta. Shaqadoodu waa mid aad u muhiim ah marka la eego cudurrada garashada ee saameeya samaynta xusuusta waxay cawaaqib xun ku yeelanaysaa taariikhda aan la daaweyn karin mukhaadaraadka, daaweynta dabeecadda, ama habab kale.
Boris Zemelman, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Neuroscience, iyo Daniel Johnston, Ph.D., Professor of Neuroscience iyo Agaasimaha Xarunta Waxbarashada iyo Xusuusta, Jaamacadda Texas ee Austin
Cilad-celin aan horay loo arag oo ah Xanuunka Xanuunka Xanuunka
Xarunta Austin for Learning and Memory researchers Daniel Johnston iyo Boris Zemelman ayaa isku darsaday inay bartaan doorka kiliyaha hore (PFC) ee Fragile X Syndrome (FXS). FXS natiijooyinka ka imanaya isbeddel ku yimaad hidda loo yaqaan fmr1 iyo luminta protein tan la yiraahdo FMRP, carqaladeeyo shaqeynta neuronal. FXS waa nooca ugu badan ee la isku halleeyo naafonimo maskaxeed iyo tan ugu badan ee keenta cudurka autism. Isticmaalida tusaalaha mashiinka kaas oo fmr1 gene ayaa la tirtiray, sheybaarka Johnston wuxuu baranayey habdhaqan fudud oo ku shaqeyn kara xusuusta oo loo yaqaan 'trace eye shut-eye flashing', taas oo xiriirinta muuqaal muuqaal ah oo leh maqaallo aan dhexdhexaad ahayn oo keenaya indho furan. Waxaa xiiso leh, jiirarka oo aan laheyn fmr1 hiv iyo borogaraamka FMRP ma awoodaan inay bartaan hawshan. Mashruucaan, baarayaashu waxay isticmaali doonaan fayrasyada ay u samaysay Zemelman si ay uga saarto ama u bedesho FMRP khadadka gaarka ah ee PFC, ka dibna fiiri anshaxa xayawaanka, isku dhafida borotiinka neuronal iyo qaababka dabka ee unugyada PFC ee la soo xulay. Waqti-dheer, cilmi-baaristu waxay ballan-qaad u tahay ballan-qaadka daaweynta FXS iyo autism iyadoo la go'aaminayo bartilmaameedyada gacanta ee habboon ee waxqabadyada daweynta.
David J. Foster, Ph.D., Professor-ka ah ee Neuroscience, Jaamicadda Johns Hopkins University of Medicine
Doorka ikhtiraac ee hippocampal ee isku xigga unugyada ee barashada iyo xusuusta
David Foster iyo kooxdiisa ayaa raadinaya su'aalo asaasi ah oo ku saabsan xusuusta iyo sida hippocampus u shaqeeyo maadaama aan qorsheyneyno tallaabooyinka mustaqbalka ee ku tiirsanaan wixii aan horay u qabannay. Inkasta oo la og yahay in isla jilibaatada dabka hippocampus ay muujinayso marka aan la kulanno meel muuqaal ah oo aan horey u soo marnay, tani ma wali sharaxin waxa unugyada hippocampal ay tahay inay xasuusato. Kooxda Foster ayaa xiiseyneysa taxanaha qaababka dabka ka soo baxa marka jiirarka iyo jiirarka ay filayaan in ay u socdaan meel bannaan oo muuqaal ah, ka dib marka la eego waqtiga safarka maskaxda ama xusuusta jimicsiga ee hippocampus. Kobcin iyo kooxduba waxay go'aamin doonaan waxa dhacaya marka ay carqaladeeyaan taxanaha maskaxda iyo isku dayaan inay wax ka beddelaan dabeecadaha la filayo. Dhibaatada Hippocampal iyo naafanimada xusuusta ayaa ah qaabka ugu muhiimsan cudurrada maskaxda iyo xitaa da'da caadiga ah, oo hoosta ka xariiqaya baahida loo qabo in la kordhiyo fahamkeena aasaaska neefsiga ee xasuusta episodic.
Ueli Rutishauser, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Neurosurgery, Cedars-Sinai Medical Center; Booqashada Associate (ballan wadajir ah), Machadka Kaliyah ee California
Adam Mamelak, MD, Professor of Neurosurgery, Cedars-Sinai Medical Center
Hippocampal theta isku-duwidda istiraatiijiga ah ee isuduwidda hawlaha neural ee xasuusta aadanaha
Drs. Kooxda Rutishauser iyo Mamelak ee kooxda daaweynta iyo cilmi-baarayaasha waxay xalliyaan waxa unugyada maskaxda dadku sameynayaan marka ay abuurayaan xusuus cusub iyo dib u soo celin. Waxay la shaqeeyaan dadka bukaanka qaba electrodeska lagu gashado maskaxda iyagoo qayb ka ah hababka neerfurka. Inkasta oo bukaannada ay daaweynayaan, kooxda cilmi-baarista waxay maamushaa imtixaanada xasuusta iyo diiwaangelinta waxqabadka maskaxda gaarka ah ee hippocampus, qaab dhismeed maskaxeed oo lagama maarmaan u ah sameynta xusuus cusub. Isticmaalka farsamadan, kooxdu waxay baaraysaa sida waxqabadka neuronal ah ee isku duubnaanta jilitaanka maskaxda iyo sida isku-duwidda noocaas ah ay u ogolaato sameynta xusuus cusub. Isku-duwidda maskaxda ee 'deficient neuronal' ayaa loo maleynayaa inay tahay sababta ugu weyn ee dhibaatooyinka xasuusta. Sidaa daraadeed, barashada sida maskaxda bini'aadamka u sameyso xusuus cusub iyo si gaar ah u falanqeynaya sida loo yaqaan oscillations-ka udub dhexaadka udhexeeya noocyada kala duwan ee hawlaha qanjirada waxay keeni karaan faham wanaagsan oo ku saabsan sida daawada iyo daaweynta dareen-celinta ay gacan ka geysan karto hawlaha xasuusta.
Daphna Shohamy, Ph.D., Professor of Psychology iyo Zuckerman Mind, Maskaxda, Habdhaqanka Habdhaqanka, Jaamacada Columbia
Sidee go'aanada hir-galka xasuustu ugu talagalaan: hababka neuraliska iyo saamaynta xusuusta
Dr. Shohamy ayaa baaraya sida xasuusta loo isticmaalo marka aan gaarno go'aamada. Xitaa sida ugu fudud ee go'aannada, sida waxyaabaha aad u dalbanaysid qadada, waxay ku tiirsan yihiin xasuusta waayo-aragnimadii hore. Si loo fahmo hababka maskaxda ee xasuusta loo adeegsado in lagu hogaamiyo go'aanada, kooxda Dr. Shohamy ayaa isku dari doona laba waji oo kala duwan. Waxay isticmaali doonaan fMRI si loo baaro dhaqdhaqaaqa maskaxda halka dadka caafimaadka qaba ay sameeyaan go'aammo go'an oo sahlan waxayna fiirin doonaan qaybta xasuusta ee xasuusta gobollada maskaxda si loo helo habka go'aan qaadashada. Waxay sidoo kale barbardhigi doonaan go'aan qaadashada dadka caafimaadka qaba bukaanka qaba xasuusta daran. Dr. Shohamy wuxuu iskaashi la leeyahay neurobiiste, Dr. Michael Shadlen, oo baranaya sida loo yaqaan 'neurons' u ururiyay caddayn si loo sameeyo go'aamada sahlan ee fudud. Cilmi-baaristu waxay isu keentaa laba meyd oo kala duwan oo cilmi-baaris ah: sida maskaxdu xasuusato xasuusta, iyo sida ay u ururisay caddaynta go'aan qaadashada. Himilada muddada dheer ee cilmi-baarista waa in la wanaajiyo tayada nolosha ee bukaanka leh xasuusta xusuusta iyadoo la fahmayo sida xasuusta lumisku u saameeyso go'aamada maalinlaha ah iyo sameynta waxqabadyo hagaajinaya dhibaatadan.
Kimberley Tolias, Ph.D., Professor, Baylor College of Medicine
Andreas Tolias, Ph.D., Professor, Baylor College of Medicine
Ka baaraandegida xasuusta caalamka ee xasuusta kali ah
Niyoolojiyada maskaxdeena waxay la xiriiraan xiriirka isku-xirnaanta, oo noqonaya mid xoog badan ama daciif ah inta lagu jiro barashada. Si kastaba ha noqotee, kaliya qayb yar oo ka mid ah trillions of synapses ee maskaxda ka qaybqaataan sameynta hal xusuus ah. Dr. Kimberley Tolias iyo ninkeeda, Dr. Andreas Tolias, waxay isu keeneen khibradahooda kala duwan ee qanjidhada nuucyada kala duwan iyo qaababka neurosiyaanka si ay u horumariyaan hab lagu calaamadiyo qalabka gaarka ah ee la xiriira hal xusuusta. Waxay ku magacaabaan qalabkan Multi-Color Neuronal Calaamadaha Habboonaha Engram, ama MNIMES ("xusuusta" Giriigga). Habkani wuxuu ka caawinayaa inay si fiican u fahmaan sida xusuustada loo abuuro maanka caafimaadka leh, iyo sidoo kale sida habkani u bedelayo cudurrada xididada sida autism ama Alzheimers. Cilmi-baaristu waxay u horseedi kartaa daaweyn hiddesid ama daaweyneed cusub si loo soo celiyo shaqooyinka caadiga ah ee tijaabinta iyo bustaanta cuduradan. Xubnaha muhiimka ah ee shaybaarada Tolias ee wadata mashruucan waxaa ka mid ah Drs. Joseph Duman iyo Jacob Reimer.
Jacqueline Gottlieb, Ph.D., Associate Professor of Neuroscience, Jaamacada Columbia
Dhaqdhaqaaqa dadka oo calaamadeeynaya hubin la'aanta iyo abaalmarinta xaafadaha hoose iyo kaniisadaha
Gottlieb ayaa baaraya dabeecadda dareenka, isaga oo ku dhajiyay in laba waxyaalood oo muhiim ah iyo abaal-marin la'aan-ay ku dheehan tahay oo ay ku jiraan cuduro badan oo maskaxda, sida ADHD, walwal iyo walaac. Isticmaalida nidaamyada muuqaal ee daanyeerada iyo fiirinta dadka waaweyn ee qanjidhada oo isku duuban, shaybaarku wuxuu baari doonaa sida hubin la'aanta iyo abaalmarinta loo adeegsado xakamaynta iyo koontaroolka dhaqdhaqaaqa indhaha.
Michael Greicius, MD, MPH, Associate Professor of Neurology, Jaamacadda Stanford
Xaqiijinta isdhexgalka galmada iyo APOE khatarta cudurka Alzheimers
In kabadan nus ka mid ah bukaanka Alzheimers ayaa qaata noocyo kala duwan oo lagu magacaabo APOE4, taas oo khatar badan u ah dumarka marka loo eego ragga. Greicius wuxuu qorsheynayaa in uu baaro APOE4 bini-aadanka, raadinta noocyada kala duwan ee unugyada kale ee la fal-galaya APOE4 si ka duwan jinsiga, waxayna weydiinayaan in eerotrogen hoos u dhaco cilladda dumarka ay kordhin karto khatarta haweenka. Hadafku waa in la helo fikrado cusub sida APOE4 ay u kordhiso khatarta cudurka Alzheimer, taasoo laga yaabo inay caawiso in la ogaado daaweyn cusub iyo laga yaabo in ay keenaan talooyin ku saabsan beddelaad hormoonka ku salaysan xaalada APOE4.
Stephen Maren, Ph.D., Professor of Psychology iyo Machadka Neuroscience, Texas A & M University
Hore-hippocampal isdhexgalka ee xasuusta xasaasiga ah
Maren wuxuu raadineyaa inuu fahmo nidaamka maskaxda iyo wareegyada xusuusto xasuusta habka loo yaqaan - nidaam qeexaya waxa, goorta, iyo meesha dhacdooyinka nolosheena ka dhacay. Dhibaatooyin badan oo xasuusta ah, oo ay ku jiraan cudurka Alzheimers, waxay la xiriiraan awood la'aanta in ay xasuusato faahfaahinta qeexan ee qeexan oo ku saabsan khibrad. Maren waxay isticmaali doontaa hababka daawada farmasogenogga ah ee jiirka si loo xakameeyo qanjidhada ku jirta khamiirka oo isku xidhaya kiliyaha hore iyo hippocampus si ay u muujiyaan sida xiriirkani uu wax ku biiriyo xasuusta.
Philip Wong, Ph.D., Professor of Pathology iyo Neuroscience, iyo Liam Chen, MD, Ph.D., Kaaliyaha Professor ee Pathology, jaamacada Johns Hopkins
Aqoonsiga iyo ansixinta bartilmaameedka cusub ee daaweynta ee TDP-43 xayawaanka xoolaha ee dementia
Cudurka 'Front Endememporal Dementia' (FTD), oo ah koox ka mid ah dhibaatooyinka adag ee keena neurodegeneration ee xuddunka horay iyo xayawaanka caadiga ah, waa nooc weyn oo asaasaq ah oo saameynaya dadka da'doodu ka yar tahay 65 jir. Wong iyo Chen waxay rajeynayaan inay buuxiyaan farqiga awoodda lagu daweeyo cuduradan. Waxay cadeeyaan in luminta shaqadii protein ee gaar ah, TDP-43, ay ku lug leedahay. TDP-43 waxay suurtagal noqon kartaa in la xakameeyo bartilmaameedyada kala duwan ee mecaadaha kuwaas oo ku lug leh xusuusta iyo hoos u dhaca fahamka FTD. Shaybaarku wuxuu ku shaqeyn doonaa baaritaanka daroogada ee duqsiyada miraha si uu u ogaado waxa keena bartilmaameedyada horumarinta daroogada.
Nicole Calakos, MD, Ph.D., Professor of Neurology iyo Neurobiology, iyo Henry Yin, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Psychology iyo Neuroscience, Jaamacada Duke
Laga soo bilaabo caadada wanaagsan ee xun: Baaritaanka xidhiidhka ka dhexeeya habitida barashada iyo isku qasnaanta
Calakos iyo Yin waxay raadinayaan sida qaabka firfircoonida firfircoonida ee noocyada unugyada kala duwan ee gangliyada basal isbeddelayso barashada. Inkasta oo wax badan laga og yahay waxa ku saabsan xiriirka synaptic ee maskaxda inta lagu jiro habka waxbarashada, wax yar ayaa laga ogaadaa sida isbeddeladan loo dhexgelinayo saamaynta nuucyada neuronal ee ka dhexjirta dadka qanjirada ku jira wareegga la bixiyey. Cilmi-baadhayaashu waxay soo saarey hab ay ku baaraan wax-barashada heerkan iyo waxay ku dabaqi doonaan sida loo ogaado sida dhaqdhaqaaqa neuraladu isbeddel ku sameeyaan astaamaha sida caadooyinka la baranayo iyo in dabeecadda barashada caadiga ah ee barashada caadi u horseedi karta dabeecadaha adag. Shaqadani waxay suurtogal u tahay in la hagaajiyo fahamkeena sida habka caado u noqotey lagu qeexay qallajinta iyo sida geeddi-socodka loo kala gooyo cilladda qasabka ah (OCD) iyo cudurada la xiriira.
Edward Chang, MD, Aasaasaha Qalitaanka Qalitaanka Xanuunada iyo Fiyoloji, Jaamacadda California, San Francisco
Sida aynu u baran karno ereyada: neurophysiology ee xusuusta hadalka
In carruurnimada iyo qaan-gaarnimada, waxaan dhisnaa oo hirgelinnaa erayada ballaaran, laakiin ma garanayno sida dhabta ah. Sababtoo ah luuqadu waxay u dhigantaa bini'aadamka, Beddelidda qorshooyinka barashada hababka barashada erayada ee dadka-gaar ahaan, bukaanka ku jira hababka neerfurgalka iyo haysashada electrodeska lagu gashado muraayadaha loogu talagalay calaamadaha kiliinikada, sida daweynta suuxdinta. Waxa uu rajeynayaa in uu helo aqoon muhiim ah oo ku saabsan sida shabakadaha maskaxda loo isugu duwo erayada barashada. Sababtoo ah dhibaatooyinka erey-helidda waa calaamad caadi ah oo la xiriirta gabowga iyo xaalado badan oo neerfaha, sida cudurka Alzheimers, stroke iyo aphasia, daaweynta cusub ee ilaalin karta ama kor u qaadi karta hawlaha maskaxda ee xaaladahan waxay ku xirnaan doontaa fahamka erayada la barto.
Adam Kepecs, Ph.D., Professor Associate, Cold Labor Harbor Labor Day
Calaamada noocan oo kale ah ee calaamadaha muuqda ee laga helayo basalis nucleus
Kepecs 'shaybaarka ayaa baraneysa basalis nucleus (NB), waa hab aan fiicneyn oo loo fahmo nidaamka neuromodulatiga kuwaas oo hoos u dhigaya hoos u dhigista hawlaha garashada ee bukaanka qaba cudurka Alzheimers, waallida' Parkinson 'iyo waayeelka garashada ee da'da caadiga ah. Waxaa jira caddayn ah in NB uu leeyahay doorka barashada iyo dareenka laakiin looma oga waxa calaamadaha nidaamkani u diro koontada. Si aad u hesho aqoon aasaasi ah oo ku saabsan, Kepecs waxay diiwaangelin doontaa cholinergiyada qanjidharka NB ee lagu yaqaan jiirka jiirarka. Cilmi-baarista, oo isu-geynaysa habdhismaha farsameed ee jimicsiga, cilmi-nafsiyaadka maskaxda ah iyo farsamooyinka farsamada, waxay go'aan ka gaari doonaan calaamadaha qaaska ee gaarka ah iyo marka, iyo haddii ay leeyihiin calaamado ku habboon oo lagu taageerayo barashada iyo dareenka. Aqoonta qaababka dabka ee nucubyadaas ayaa bixin doona macluumaad muhiim ah oo loogu talagalay horumarinta daaweynta daweynta cudurada garashada.
John Wixted, Ph.D., Mabda 'Professor of Psychology, iyo Larry Squire, Ph.D., Borofisar cilmi-nafsi, maskaxda iyo cilmi-nafsiga, Jaamacadda California, San Diego
Muujinta xusuusta epidodic iyo semantic ee hal maskaxda halbowlaha ah ee hippocampus aadanaha
Baarayaashu waxay raadinayaan in qanjirrada shakhsiyadeed ee qaybo kala duwan oo ka mid ah hippocampus beni-aadamku ku xusuusto xusuusta. Su'aasha ah sida maskaxda ee dukaamada lagu xasuusto waxa la baaray iyada oo la adeegsanayo habab kale, laakiin dhammaantood waxay leeyihiin xaddidaad. Daraasaddan, Wixted iyo Squire waxay la shaqeynayaan Dr. Peter Steinmetz oo ku yaal Machadka Barrow Neurological Institute si uu bukaanka uga waydiiso xusuusinta sawiro iyo / ama ereyo. Cilmibaaristu waxay cabbiri doonaan dhaqdhaqaaq hal joonis ah meelo kala duwan oo ka mid ah hippocampus maaddaama bukaanku mar dambe xasuustaan waxyaabahaas. Hadafka muddada dheer waa in la abuuro aasaas u ah horumarinta xarumaha daaweynta ee loogu talagalay in la yareeyo xasaasiyadda xasaasiga ah ee la xidhiidha gabowga iyo in la yareeyo socodka cudurrada neurodegener-ka ee hippocampus kaas oo si weyn u liita kartida kartida.
Alison Barth, Ph.D., Jaamacadda Carnegie Mellon
Qabashada khaaska ah ee baaxadda khibradda ku-xiran ee neocortex
Isticmaalka moodada jilista ee u oggolaanaya diiwaan galinta qalabka korontada ee unugyada neeforti, Barth wuxuu u shaqeyn doonaa inuu aqoonsado dareemeyaasha gaarka ah ee isbeddelay oo ay eegaan qoraallada la taaban karo ee unugyadaas, iyo sidoo kale inay isku dayaan in ay isbeddel ku sameeyaan qayb ka mid ah qaybaha unugyada ee vivo. Su'aasha muhiimka ah waa sida khibraduhu u beddelaa unugyada iyo isku xirnaanta unugyada, iyo waxa ku saabsan geeddi-socodka waa mid aad muhiim u ah barashada iyo xasuusta.
Charles Gray, Ph.D., Jaamacadda Montana State
Qaybinta habka loo qaybiyo garashada
Gray's shaybaarku wuxuu soo saaray uun qalab lagu cabbiri karo dhaqdhaqaaqa maskaxda ee jimicsiyada rhesus ee xayiraad aad u sarreeya oo qotodheer meelo badan. Inta lagu jiro mudada abaal-marinta, Gray wuxuu qorsheynayaa in uu qiyaaso dhaqdhaqaaqa maskaxda oo ka yimaada meella badan oo maskaxda ah si uu u helo aragti balaadhan oo ku saabsan sida iyo meesha macluumaadka loo qoondeeyey marka maskaxdu ay wax ku qabato xasuusta gaaban.
Geoffrey Kerchner, MD, Ph.D., iyo Anthony Wagner, Ph.D., Jaamacadda Stanford
Qaab dhismeedka Hippocampal iyo shaqeynta naafanimada garashada
Kerchner waxa uu qorsheynayaa inuu isticmaalo teknoolojiyada sawir-maskaxeed (magnetic resonance imaging) (MRI) si loo barto hoos-u-dhexaadka hoose ee hippocampus si loo arko sida ay u saameeyaan cudurka Alzheimers. Wuxuu baran doonaa qaab dhismeedka jirka ee hippocampus oo leh hal teknoolaji, iyadoo lala kaashanayo Wagner, wuxuu isticmaali doonaa tiknoolojiyada kale si uu u barto sida kooxaha unugyada dareemayaasha hippocampal ee dabka ku qabtaan xiliyada xusuusta.
Attila Losonczy, MD, Ph.D., Jaamacadda Columbia
Maqnaanshaha miyir-beelka hippocampal xakameyn la'aanta xasaasiga ah garashada xusuusta garashada ee shisoofrani
Losonczy waxay dooneysaa in lagu horumariyo fahamka hababka xasuusta ee maskaxda caafimaadka leh iyo kuwa bukaanka qaba si loo ogaado bartilmaameedyada muhiimka ah ee ka hortagga iyo daaweynta dhibcaha xusuusta. Isticmaalida moodada sawirada, waxa uu qorsheynayaa in uu isticmaalo sawirada casriga ah ee muuqaalka muuqaalka ah si loo ilaaliyo loona xakameeyo wareegga neerfaha ee hippocampus inta lagu jiro dabeecadaha xusuusta, raadinta sida ay uur-ku-taalladan u shaqeeyaan barashada caadiga ah iyo sida ay u bedelaan shisoofrani.
Ben Barres, MD, Ph.D., Professor of Neurobiology, Stanford University School of Medicine
Miyuu Astrocytes xakameyn karaa Ciriiriga Synaptic? Nooc cusub oo loogu talagalay Maxaa keena Cudurka Alzheimer iyo sida looga hortago
Maaddaama jirkeena da'da, waxaa suuragal ah in loo baahan yahay farsamo loo baahan yahay si looga soo saaro jadwalka da 'wayn ee maskaxda si loogu beddelo kuwo cusub. Barre ayaa baaraya in astrocytes door ka qaadaneyso iyo haddii ay sidaas tahay, waxa dhacaaya haddii shaqadooda ay naafo tahay. Shaqadu waxay leedahay awood ay ku hormariso fahamka iyo daaweynta cudurka Alzheimers.
Wen-Biao Gan, Ph.D., Associate Professor ee Physiology iyo Neuroscience, New York University School of Medicine
Waxqabadka Microglial ee Waxbarashada iyo Ciladaha Hurdada
Gan ayaa baaraya haddii microglia ay kaalin muhiim ah ka ciyaarto barashada iyo xusuusinta. Isticmaalka khadka cusub ee cirifka jilicsan wuxuu soo saaray, wuxuu fiirin doonaa sida looga takhalusayo microglia ama sameynta iyaga oo aan shaqaynayn waxay saameeyaan wareegyada neuralada. Daraasadu waxay ku siin doontaa aragti loogu talagalay fahamka iyo daaweynta xanuunka maskaxda sida autism, niyadjabka maskaxda iyo cudurka Alzheimers.
Elizabeth Kensinger, Ph.D., Associate Professor of Psychology, Boston College
Isbeddelada kuyaal Dhaqameedyada Waqtiga iyo Isku-xirnaanta Nidaamyada Xasuusta Xajmiga ah ee Hareeraha Dadka Weyn
Kensinger wuxuu baranayaa saameynta dareenka xasuusta. Cilmi-baaristu waxay qaadataa aragti nololeed, qiimaynta xasuusta iyo nashaadyada qaangaarka ee dadka waaweyn da'doodu tahay 18-80. Waxay baari doontaa sida macluumaadka dareenka ah loo sooceliyo, oo ay ku jiraan cabbirada xajmiga iyo fogaanta ee xusuusta. Cilmi-baaristu waxay suurtogal u tahay inay horumariso fahamka isbeddelka xusuusta ee la xidhiidha da'da, iyo sidoo kale cilladaha sida niyad-jabka iyo cilladda post-stress disorder.
Brian Wiltgen, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Psychology, Jaamacadda Virginia
Dib-u-xoojinta shabakadaha xasuusta ee Neocortical inta lagu jiro isdhexgalka
Xusuusta cusub waxaa lagu xardhay hippocampus iyo waqti dambe ayaa si joogto ah loogu kaydiyaa gobollada neocortex. Wiltgen waxay raadineysaa hababka bayoolojiga ee hoosta ku haysa habkan kaydinta, iyadoo la adeegsanayo farsamooyin cusub si loo xakameeyo hawlaha wareegyada xasuusta hippocampus iyo neocortex. Shaqada ayaa saameyn ku yeelanaysa daaweynta Alzheimers iyo cudurrada kale ee saameynaya xasuusta.
Cristina Alberini, Ph.D., Professor of Neuroscience, Mount Sinai School of Medicine
Doorka Astridyaha ee Xasuusta iyo Caqli-yada Cognitive
Alberini wuxuu diiradda saarayaa isdhexgalka u dhexeeya neur-mooraanka iyo astrocytes ee xasuusta xusuusta. Waxay sahmin doontaa aragtida ah in cilladahan isdhexgalka ahi ay keeni karto cillad garasho iyo in la eego daaweyn cusub oo cusub oo loogu talagalay cilladda garashada ee la xidhiidha gabowga iyo neurodegeneration.
Qandaraasle Anis, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Physiology, Jaamacadda Northwestern School of Medicine
Hawlgalinta Kooxda I mGluRs si ay u soo celiso xasuusta Cabsida
Mouse la'aanta qaboojiyeyaasha glutamate ee la yiraahdo mGluR5 ma demin karo xusuusta cabsida leh. Qandaraasle ayaa qorsheynaya inuu barto doorka qashin-qaadyadan, khariidadda wareegyada maskaxda ee lug ku leh barashada cabsida xaaladaha ku haboon iyo in la xakameeyo cabsida aan habooneyn. Waxa kale oo uu arki doonaa haddii daroogooyinka cusubi ay dardar galin karaan geedi socodka barashada si aan xad dhaaf ahayn. Daawooyinka la midka ah waxay noqon karaan kuwo wax ku ool ah oo ku saabsan daaweynta xanuunka bini'aadamka.
Loren Frank, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Physiology, iyo Mary Dallman, Ph.D., Professor Emerita ee Physiology, Jaamacadda California, San Francisco
Nidaamka Heerka Degdega ah ee Fahamka iyo Daaweynta Cudurrada Hooska la xariira Cadaadiska
Frank iyo Dallman waxay eegayaan in isbeddellada yar ee waxqabadka maskaxdu ay gacan ka geysan karaan yaraynta saameynta dheer ee diiqada ee barashada iyo xusuusta. Haddii ay fikirkoodu ku adkeysto in culays la saaro dib-u-xasuusashada xasuusta, waxay caddaynaysaa inay tahay kiiska, daaweynta waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo saamaynta dheer ee dhacdooyinka walaaca leh. Cilmi-baaristu waxay saameyn gaar ah u leedahay xanuunka dhimirka ee post-traumatic stress.
Michael Mauk, Ph.D., Professor, iyo Daniel Johnston, Ph.D., Professor iyo Agaasime, Xarunta Waxbarashada iyo Xusuusta, Jaamacadda Texas ee Austin
Mashruucyada Hawlaha joogtada ah ee Kortikal
Mauk iyo Johnston waxay isticmaali doonaan nidaamyada iyo hababka taleefanka labadaba si ay u bartaan xusuusta shaqada labadaba xayawaanka nool iyo tijaabooyinka yaraanta maskaxda iyadoo la adeegsanayo hababka kaydinta ee neuronka. Sababtoo ah xasuusta shaqadu waxay ka qayb qaadataa habab badan oo garashada, fahamkoodu wuxuu hagaajin karaa ogaanshaha iyo daaweynta cuduro badan, oo ay ku jiraan cudurka Alzheimer iyo ADHD.